आज युरो, पाउन्ड र कतारी रियालको भाउ बढ्यो, अन्य देशको मुद्रा विनिमयदर कति छ ? (सूचीसहित) - केन्द्र खबर
आज युरो, पाउन्ड र कतारी रियालको भाउ बढ्यो, अन्य देशको मुद्रा विनिमयदर कति छ ? (सूचीसहित)
२०७८ पुस १ ०९:५५
राष्ट्र बैंकले आज (बिहिबार) कायम गरेको मुद्रा विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम १२१ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १२२ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ ।
युरोपियन युरो आज एकको खरिद दर १३७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ८५पैसा रहेको छ । आज युरोको भाउ हिजोको तुलनामा बढेको हो । हिजो एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्री दर १३७ रुपैयाँ ५५ पैसा छ ।
आज युके पाउन्ड स्टलिङको भाउ पनि बढेको छ । आज स्र्टलिङ एकको खरिददर १६१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १६२ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ । हिजो एकको खरिद दर १६० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर १६०रुपैयाँ ९२ पैसा थियो ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८६ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री दर ८७ रुपैयाँ १८ पैसा छ । जापानी येन आज १० को खरिद दर नेपाली १० रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ भने चिनियाँ यूआन एकको खरिद दर १९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आज साउदी अरबियन रियाल आज एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्री दर ३२ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ भने कतारी रियाल आज एकको खरिद दर ३३ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ । हिजो एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्री दर ३३ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको थियो । मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८ रुपैयाँ ७७ पैसा छ भने बिक्री दर २८ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ ।